Daawo: Qeybtii 3aad ee taxanaha lagu faaqidayo khaladaadka sharciga ee Dastuurka iyo xeerarka DFS oo la baahiyey
Sunday September 12, 2021 - 19:30:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mu'asasada Alkataa'ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay xalqadii 3aad ee muuqaalada lagu falanqeynayo qodobada gaalnimada ah ee kujira dastuurka DFS iyo xeerarka kufriga ah ee ay ku dhaqanto DFS.
Sh. Xusseen Cali Fiidoow, Mas'uul katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin
Xalqada caawa la baahiyey oo ah mid xiiso badan waxaa lagu faaqidayaa waxa uu dastuurku ka yiri xoriyadda diimaha, sinnaanta muwaadiniinta gaal iyo Muslimba iyo qodobka ah in qof walba xor u yahay inuu ku dhaqmo diinta uu doono.
Waxaa xalqadan ka qeyb qaadanaya oo gaalnimada qodobadaas falanqeynaya culimo waaweyn oo ay ku jiraan Sheekh Cumar Faaruuq, Sheekh Maxamed Macalin Xasan iyo qaar ka mid ah hogaanka Xarakada.
Waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta DFS oo ku hadaaqaya hadalo kufri ah islamarkaana ku jeesjeesaya diinta Islaamka.
Halkan ka Daawo Qeybta 3aad
Halkaan ka Degso Qeybta 3aad
Sarkaal lagu dilay Muqdisho iyo weeraro ka dhacay wilaayaatka qaar.